अक्सर विदेशी भाषा शिक्षक को अध्ययन लेखन मा प्रस्ताव वा orally कोठा विवरण ल्याउन। यो अंग्रेजी यो एकदम सजिलै गर्छन्। यसलाई एक निश्चित शब्दावली र विदेशी भाषा को प्राथमिक Basics द्वारा निर्देशित छ महत्त्वपूर्ण छ। को निबंध लेखन प्रक्रिया मा अंग्रेजी मा "कोठा वर्णन" सबै यो छ विस्तृत रूपरेखा हुँदैन। बस मुख्य जोड, कुरा विकसित। कोठा को मालिक भने - बिरुवाहरु को एक प्रेमी, तपाईं इन्डोर हरियो को प्रसार र फूल को ठूलो संख्या निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फुटबल लागि प्रशंसक, वा जात को समतल मा रहेका ट्राफियों विवरण फिट।
काम सुक्खा र बोरिंग थिएन गर्न, विवरण सबै फर्नीचर सूची छैन।
उदाहरणका अनिच्छुक र सुक्खा विवरण (गर्दा मा रूसी): "म कोठा मा छु छ एक बिस्तर, गलैँचा, डेस्क, कम्प्युटर, टेलिभिजन र रातो अल्मारी"। यो सबै आफ्नो साहित्यिक कौशल लागू गर्न सिफारिस गरिएको छ त कथा, रोचक रचनात्मक हुनुपर्छ।
मेरो कोठा (प्राथमिक स्कूल बालिका लागि)
प्राथमिक विद्यालय बालिका लागि अंग्रेजी मा कोठा को अनुमानित विवरण विचार गर्नुहोस्। निम्न रूसी-बोल्ने एक शाब्दिक अनुवाद छ।
केटी यो जस्तो सक्छ लागि अंग्रेजी मा कोठा विवरण:
म रंग गुलाबी र गुडिया प्रेम।
त्यहाँ यति धेरै फरक सुन्दर गुडिया र मेरो कोठा मा गुलाबी वालपेपर छन्।
मेरो कोठा मा एक राजकुमारी महल जस्तो।
म सिक्न मन, त्यसैले म एक ठूलो र उज्ज्वल तालिका एक विन्डो अगाडि खडा छ।
विन्डो मा सुन्दर फूल धेरै, म तिनीहरूलाई पानी हाले प्रेम।
खाट बसिरहेका मेरो मनपर्ने टेड्डी भालु छ।
आफ्नो आमाबाबु मेरो जन्मदिन लागि मलाई दिनुभयो।
अंग्रेजी मा कोठा को कथा अनुवाद र निम्नानुसार यसका सामग्रीहरू हुनेछ:
म रंग गुलाबी र गुडिया मनपर्छ।
त्यसैले मेरो कोठा मा विभिन्न सुन्दर पुतली र गुलाबी वालपेपर धेरै।
म जान्न चाहनुहुन्छ, त्यसैले म एक ठूलो र उज्ज्वल तालिका, झ्याल अगाडि खडा छ जो छ।
विन्डो धेरै सुन्दर फूल मा, म तिनीहरूलाई पानी प्रेम।
खाट मा मेरो मनपर्ने टेड्डी भालु बस्छन।
. मेरो आमाबाबुले मेरो लागि मलाई दिनुभयो जन्मदिन।
मेरो कोठा (लेखन अंग्रेजी केटाहरू 'प्राथमिक विद्यालयमा)
विवरण अघिल्लो खण्ड, केटाहरू लागि उपयुक्त छैन प्रदान। गुडिया, गुलाबी वालपेपर र टेड्डी बदमास हुल्याहाहरू आफ्नो मनपर्ने फुटबल टोली को reminiscent सामान संग एक कोठा रुचि सहन। मोटर गाडी प्रशंसक शैली Makvinn मिसिन मा स्थिति को लागि सबै भन्दा राम्रो एक हुनेछ लागि।
केटाहरू लागि विकल्प: "मेरो कोठा" (अंग्रेजी मा लिख)।
"मेरो नाम सर्गेई छ, म फुटबल खेल्न विभिन्न फुटबल बलमा धेरै मनपर्छ। मेरो कोठा मा, र फुटबल टोली को पोस्टर रचनाहरू पर्खाल मा। मेरो बुबा र म खेल गए र मनपर्ने टोली को autographs संग बल ल्याए ।
पनि म कहाँ खेलाडी द्वारा आएको सो को सोफा मा।
म पनि पुस्तकहरू धेरै मेरो कोठा मा समतल पढ्न चाहनुहुन्छ। सबैभन्दा विज्ञान को द्वीप गर्न परदेशी र यात्रा बारे कल्पना। कम्प्युटर डेस्क सुन्दर फूल संग केहि बर्तन राख्नु मा आमा थियो। आमा "तिनीहरूले स्वास्थ्य को लागि धेरै राम्रो हो भन्छन्।
"मेरो नाम सर्ज, म साँच्चै फुटबल खेल्न प्रेम फरक फुटबल बलमा धेरै छ। मेरो कोठा मा, र पर्खाल मा फुटबल टोली को पोस्टर छन्। मेरो बुबा र म खेल गए र आफ्नो मनपर्ने टोली को autographs संग बल ल्याउन। तैपनि म कहाँ सुत्न ओछ्यानमा, मा , खेलाडी द्वारा आएको।
म पनि पढ्न, को समतल मा मेरो कोठा मा पुस्तकहरू धेरै माया गर्छु। यस द्वीप गर्न परदेशी र यात्रा बारे सबैभन्दा कल्पना। कम्प्युटर डेस्क मा आमा सुन्दर फूल संग केहि बर्तन राखे। आमा तिनीहरूले स्वास्थ्य को लागि धेरै राम्रो हो भनेर भन्छन्। "
प्रस्तावित संरचना धेरै अपरिचित शब्दहरू हुन् भने यो राम्रो सही अनुवाद लेख्न र सिक्न छ। यो कार्य मात्र होइन सजिलो र रमाइलो आफ्नो कोठा बारेमा कुरा गर्न, तर पनि बिस्तारै आफ्नो शब्दावली विस्तार।
केटाहरू लागि रचना
रचनात्मक कामको लागि रचनात्मक हुन आवश्यक छ। बस अंग्रेजी मा लेख्न प्रयास नगर्नुहोस्। यसलाई आफ्नो पाठ को एक स्केच बनाउन, र त्यसपछि एक अनुवाद उत्पादन राम्रो छ। गल्ती को नडराऊ: तपाईंलाई थाहा रूपमा, गल्तीबाट सिक्नु। उचित लिखित प्रस्तुति मदतको लागि तपाईं आफ्नो शिक्षक सधैं सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
अनुवाद संग अंग्रेजी मा कोठा विवरण:
खेलकुद र प्रशिक्षण: मेरो कोठा दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। खेल र प्रशिक्षण: मेरो कोठा दुई भागमा विभाजन गरिएको छ।
अन्तर्गत आफ्नो खुट्टा न्यानो म उनको धेरै, पर्खालहरु हरियो वालपेपर, र गलैँचा मा प्रेम। म यसलाई मन पर्खालहरु हरियो वालपेपर मा, धेरै, र खुट्टा न्यानो गलैँचा अन्तर्गत।
खेलकुद खण्डमा, म खेल मा जानुहोस्। खेलकुद भाग मा म खेल खेल्छन्।
म केही सिमुलेटर छ। म धेरै सिमुलेटर छ।
प्रशिक्षण कोठा मा म एक ठूलो तालिका, र समतल मा पुस्तकहरू धेरै छन्। म एक ठूलो तालिका र धेरै पुस्तकहरू को समतल मा छ।
प्रशिक्षण तालिका अक्सर मेरो सानो बहिनी खेल्छ समयमा, त्यसैले त्यहाँ सधैं खिलौने को धेरै छ। प्रशिक्षण तालिका भन्दा अक्सर मेरो सानो बहिनी खेल्न, त्यसैले खिलौने को धेरै सधैं त्यहाँ।
बालिका लागि रचना
र अर्को निबंध, अंग्रेजी मा "मेरो कोठा":
"म साँच्चै आफ्नो घर प्रेम, विशेष गरी आफ्नो कोठा। यो धेरै हल्का र आरामदायी बन्द छ। म सफाई र अर्डर मनपर्छ। मेरो घरमा, हाम्रो सुखी परिवार को फोटो संग पुरानो फ्रेम छ सिर्फ एक सुन्दर र विशाल तालिका मा। आफैलाई लागि हेर्न आउनुहोस्। ।। तालिका साथ, तपाईं त्यहाँ एउटा ठूलो दराज छ, तर त्यसको विपरीत कोठा को बायाँ छेउमा विभिन्न उत्पादनहरु को एक धेरै ठूलो संख्या जसमा मेरो व्यक्तिगत लाइब्रेरी, देख्न सक्नुहुन्छ -। यो मेरो ओछ्यानमा मेरो कोठा धेरै आरामदायक र उज्ज्वल छ उज्ज्वल हरियो स्याउ ढाकिएको छ। "
"म मेरो घर र विशेष गरी मेरो कोठा lile। यो धेरै हल्का र आरामदायी छ। म सफाई र अर्डर मनपर्छ। यो। सुन्दर र विशाल तालिका मा हाम्रो अनुकूल परिवारको फोटो सहितको पुरानो फ्रेम छ बस बनाउन मलाई भेट्न आऊ, । तालिका को तपाईं विभिन्न कार्यहरू धेरै ठूलो संख्या जसमा मेरो व्यक्तिगत लाइब्रेरी, देख्न सक्नुहुन्छ नजिकै। कोठा को बायाँ छेउमा एउटा ठूलो दराज छ, र मेरो ओछ्यानमा विपरीत। यसलाई उज्ज्वल हरियो स्याउ संग कम्बल मा। मेरो कोठा छ धेरै आरामदायक र उज्ज्वल "।
वर्तमान सही समय: उदाहरण र डिजाइन संग नियम प्रयोग
अभिनेता "जेलबाट एस्केप": को को हो?
रकेट परिसर "क्यालिबर"। क्रूज मिसाइल क्यालिबर। लडाकू मिसाइल प्रणाली
पत्रुस Podgorodetsky: जीवनी र काम
बच्चाहरु को लागि खीरे बारेमा पहेलियों